Shiinaha Ems PCB Golaha Soosaarka iyo Warshadda | KAISHENG PCB
Lakabyada: 14 PCB Lakabka
Waxyaabaha aasaasiga ah: Sare Tg FR-4
Dahaarka birta: HASL - Lead Free Qaabka wax soosaarka: SMT + Lakabyada: 14 Lakabka PCB
Waxyaabaha Saldhigga: Sare Tg FR-4 Shahaadada: SGS, ISO, RoHS MOQ: Maya MOQ
Noocyada Kala-Bixiyaha: Laydh-la'aan (RoHS u hoggaansamaysa) Adeegyada Hal-Joogsi ah: Qeybaha, wax soo saarka PCB, Golaha PCB Tijaabinta: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Taageerada Teknolojiyada: DFM oo bilaash ah (Naqshadeynta Soo-saarista) Hubi Noocyada Shirarka: Teknolojiyada Isku-dhafan ee PCBA Heerka: IPC-a-610d
Erayoxul: EBB PCB Golaha, Adeegga Golaha PCB, Hawlaha Golaha PCB, Tirakoobka PCB, Soosaarayaasha Golaha PCB, Kharashka Golaha PCB, Golaha PCB raqiis ah,
Laga soo bilaabo soosaarida caadiga ah iyo caadada PCB-ga ee xalalka PCB-ga ee loo yaqaan 'PCBFuture' waxay isku caddeeyeen inay tahay adeeg hal-joogsi ah oo loogu talagalay dhammaan waxyaabaha PCB
Maxay u adeegsanaysaa adeegeena isku imaatinka PCB?
Waxaa naga go'an in aan siino alaab tayo sare leh oo aan caadi aheyn qiimo aad u tartan badan. Waxaan la jaanqaadnay ganacsigeenna koox shuraako istiraatiiji ah si aan ula kulanno baahiyaha is-beddelaya ee macaamiisheenna.
Laga soo bilaabo bixinta gudiyada wareegga ilaa qalabka elektarooniga ah ee dhammeeyey, waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah. Sababtoo ah waayo-aragnimadeena muddada dheer, waxaan ku bixin karnaa wax ku habboon tayada, kalsoonida bixinta, iyo suurtagalnimada dhaqaalaha.
Waxaan soo gaarsiin doonnaa alaabtaada mid ka dhaqso badan shirkad kasta oo PCB soo saarta oo suuqa ku jirta.
Ugu fiicnaanta tayada
Isku halaynta gaarsiinta
Adeeg hal dukaan ah
Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa waqtiga dhalmada ka dib markay macaamiishu amraan guddiyada PCBA?
Waqtiga umusha PCBA wuxuu xiriir dhow la leeyahay qalliinka ka hor. Macaamiisha waxay u baahan yihiin inay marka hore siiyaan waxyaabaha soo socda. Alaabta waxaa lagu geyn karaa 3 maalmood gudahood ka dib marka qalabka oo dhami dhammaado. Haddii ay jirto DIP ka baaraandegista, waxay qaadan doontaa 5-7 maalmood in la gaarsiiyo. Haddii ay jirto amar deg deg ah, horay ayaan u sii ogeysiin karnaa waxaana sameyn karnaa qabanqaabo kale.
Macluumaadka loo diyaarinayo ka shaqeynta PCBA:
1. Soosaarka caadiga ah BOM
2. Faylasha PCB;
4. Faylasha Jigsaw Gerber;
5. Faylka isku duwida jagada;
6. Liis isku dhafan oo ah qalabka SMT hore iyo gadaal, Qalabka DIP iyo liistada.
Waxaan ku bixinaa shirarka golaha ugu tayada sareeya waqtiga iyo miisaaniyada, oo ay taageerayaan adeega macaamiisha oo wanaagsan iyo dayactir aan micno lahayn iyo siyaasadaha soo celinta si loo bixiyo tayo sareysa. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad weydiiso, si xor ah ula xiriirsales@pcbfuture.com , waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa ASAP.
Hore: Golaha Xakamaynta Daabacaadda Golaha Maamulaha
Xiga: Adeegyada Golaha Flex PCB
shirkii PCB raqiis ah
Golaha PCB-ga hogaaminayo
soo saaraha shirkii PCB
golaha pcb ii dhow
wax soo saarka pcb iyo shirkii
kulan PCc noocooda
dhakhso u soo noqo shirkii PCB
Golaha smt PCc
Golaha Xakamaynta Main Home Gudiga Wareegga